Imidiya yokuncokola: Ilizwe elinamathuba amashishini amancinci | Martech Zone
Imidiya yokuncokola: Ilizwe elinamathuba amashishini amancinci
NgoMvulo, nge-31 kaDisemba ngo-2012 NgoMvulo, nge-31 kaDisemba ngo-2012 Lorraine Ibhola
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ukhetho lokuthengisa kubanini bamashishini abancinci lwalunomda. Imithombo yeendaba ngokwesiko njengonomathotholo, iTv kwaye uninzi lwentengiso yokuprinta lwalubiza kakhulu kumashishini amancinci.
Emva koko kwafika i-intanethi. Ukuthengisa nge-imeyile, imidiya yoluntu, iibhlog kunye namagama entengiso anikezela kubanini bamashishini abancinci ithuba lokufumana umyalezo wabo. Ngequbuliso, unokwenza into engekhoyo, inkampani yakho ibinkulu kakhulu ngoncedo lwewebhusayithi enkulu kunye nenkqubo yemithombo yeendaba eyomeleleyo.
Kodwa ezi nkampani zizisebenzisa njani ezi zixhobo? Rhoqo ngonyaka ukusukela ngo-2010, besisoloko sibuza abanini bamashishini abancinci imibuzo ukuze baqonde ukuba imithombo yeendaba yoluntu ingena njani kumxube wabo wentengiso.
Unyaka nonyaka, idatha ixhasa ezinye zezimvo zethu ezigcinwe ixesha elide kwaye inyikima ezinye iinkolelo. Ke sikulungele buza imibuzo kwakhona. Ngelixa ezinye izinto zihleli zizinzile, sizibonile iinguqu njengoko abanini babonakala ngathi basebenza ngakumbi, kwaye banomdla wokusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ngakumbi emva kokuqonda nje uphawu. Sifuna ukwazi ukuba into esiyibonayo kubaxumi bethu iyafana kubaphulaphuli ababanzi.
Kwisifundo sonyaka ophelileyo, nanjengokuba abanini babethatha inxaxheba ebonakalayo, ixesha eliphakathi elityaliwe kwimidiya yoluntu laqhubeka ukwehla kancinci. Amagqabantshintshi kwisifundo sethu abonakala ngathi abonisa ukwehla okuziswe ngumxube wezixhobo zemveliso ngakumbi kunye nendlela ejolise ngakumbi kwimidiya yoluntu. Sifuna ukwazi ukubona ukuba oku kuya kuqhubeka ngo-2013.
Forbes kunye nolunye upapasho lwenza uqikelelo lokusetyenziswa kweendaba zosasazo kwiinkampani ezinkulu, sifuna ukwazi ukuba kuqhubeka ntoni kumashishini amancinci.
Ngaba i-Google + ekugqibeleni iya kufumana indawo etafileni nge-Facebook, Twitter kunye ne-Linkedin? Kunyaka odlulileyo ngaphezulu kwe-50% yabaphenduli bethu bathi zange bangene kwi-G +. Ngokwam ndicinga ukuba sisekude kunyaka kule nethiwekhi ukubamba, kodwa ndifuna ukwazi ukuba ithini idatha.
I-Pinterest, i-Instagram kunye nezinye iisayithi ezisekwe kumfanekiso zingena njani kumxube wentlalontle? Kunyaka ophelileyo bendinemincili malunga nezi ndawo zikhula ngokukhawuleza, kodwa ubukhulu becala, abathengi bam abancinci bebengenamdla wokuntywila.
Ke, ukuba ungumnikazi okanye usebenzela inkampani enabasebenzi abangaphantsi kwe-100, sifuna ukwazi ukuba ucinga ntoni. Usebenzisa njani imidiya yoluntu njengenxalenye yentengiso yakho? Nceda uthathe imizuzu embalwa ukuphendula imibuzo kuvavanyo lwethu. Siza kuqokelela idatha ukuphela kukaFebruwari, emva koko sabelane ngeziphumo kule ntwasahlobo.
tags: urhweboamashishini amancinci amajelo asekuhlaleniImidiya yokuncokolauphando kwimidiya yoluntu
Kuya kufuneka siyeke ukuthetha ukuba nefuthe xa sithetha ukuthandwa
Isikhokelo sikaMthengisi kwiFowuni